Baarlamaanka Soomaaliya oo manta ka doodaya ajandaha sharciga Ban – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaBaarlamaanka Soomaaliya oo manta ka doodaya ajandaha sharciga Ban
Hiiraan Xog, Xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta isugu imaanaya kulankoodii caadiga ahaa.
Ajandaha maanta golaha horyaalla ayaa ah wax ka bedelka xeerka maamulka bangiga dhexe iyo sharciga qabyada ah ee hanti dhowrka guud kaa soo golaha wasiirradu ay dhawaan soo ansixiyeen.
Labada qodob ee ajandaha ku jira ayaa labaduba aad mihiim u ah si dib u habeyn loogu sameeyo dhaqaalaha dalka iyo nidaamka maaliyadda.
Qodobka ku saabsan wax ka beddelka xeerka uu ku shaqeeyo bankiga dhexe ayaa u muuqda mid mudanayaashu ay aad uga doodi doonaan marka la eego gaar ahaan wax ka beddelka cidda hoggaamin karta bankiga.
Jagada guddoomiyaha bankiga dhexe ayaa kal hore la xiyiisiiyay, taasoo u furreed Soomaali iyo Ajinabi intaba in ay soo codsan karaan, hasayeeshee sharciga bankiga dhexe ayaa qoraya in xiljaas aanuu qaban karin qof ajinnabi ah, waana sababta loogu baahday in baarlamanka la horgeeyo, si bid loogu eego.
7aadkan ayaa waxaa baraha bulshada lagu hadal hayay nin ajinabi ah oo la sheegay in xilkaan loo dhiibayo, hayeeshee ma jirin wax war ah oo dowladda ka soo baxay oo arrinkaan xaqiijinaya ama beeninaya.
Go’aanka sharci ee ah cidda qaban karta guddoomiyaha Bankiga Dhexe ayaa u taalla baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed.